I-Durden, indawo yedeskithophu ye-Arcan | Kusuka kuLinux
I-Durden, indawo yedeskithophu ye-Arcan
Izolo sikhulume ngakho I-Arcan, okuwuhlaka ekwakheni izindawo ze-GUI nedeskithophu futhi lapho kudalwe khona «Durden» okuyi imvelo yedeskithophu ye-Arcan Display Server.
Futhi ukuthi le ndawo yedeskithophunoma futhi uthole isibuyekezo esisha Ngasikhathi sinye, kumenyezelwe ukwethulwa kwenguqulo entsha yedeskithophu "iDurden 0.6".
Indawo yaseDurden Desktop isekela kokubili isikhombimsebenzisi esihlanganisiwe nezilawuli izakhiwo ezigcwele zekhibhodi njengesakhiwo samawindi esigobhoza mahhala.
Zonke izilungiselelo, kufaka phakathi izindlela zokufaka, amafonti, nemiphumela yokubuka, kungashintshwa endizeni, ngaphandle kokulayisha kabusha izilungiselelo. Lokhu kufana nesici esiyisisekelo sabaningi (uma kungenjalo iningi lezindawo zanamuhla zedeskithophu).
Ngaphezu kwalokho ikuvumela ukuthi ulungiselele ngendlela ye-modular bese uvumela amaphrofayli akhethwe ngumsebenzisi ukuthi empeleni akhethe izilungiselelo, izithombe, nezilungiselelo ezibonisa ideskithophu umsebenzisi ayifunayo noma ayijwayele.
Ngaphakathi, kusekelwe kusakhiwo esifana nesistimu yefayela ("Imenyu") nakho konke okunye kuyizinkomba zemizila engaphakathi kwalesi sakhiwo.
Ungahlela indlela yokuziphatha ehlukile ewindini ngalinye bese usebenzisa ibhodi yokunameka ehlukile enamathiselwe ewindini. Isekela ukusebenza kumasistimu anabaqaphi abaningi abane-DPI ehlukile.
Kungenzeka ubonise imenyu yohlelo lokusebenza kuphaneli (imenyu yomhlaba) noma ubeke imenyu kusihloko sefasitela.
Amawijethi angabekwa kwideskithophu. Kukhona ikhono elakhelwe ngaphakathi lokuqopha izenzo kudeskithophu nakumawindi ahlukile.
Isistimu yokulawula okokufaka isekela izinguquko kusakhiwo sekhibhodi kanye nekhono lokusebenza ngamadivayisi athuthukile njengamakhonsoli wegeyimu.
Mayelana nenguqulo entsha ye-Durden 0.6
Kule nguqulo entsha kushiwo ukuthi sfuthi ngisebenza ekwakheni kabusha ikhodi yokwabelana ngesikrini, ngaphandle kwalokho kunengxoxo yendawo yonke ehlongozwayo ukuvula kanye / noma ukugcina amafayela.
Olunye ushintsho olushiwo yilolo ikhono lokubeka izinkinobho zakho kubha yesimo laqalwaNgokungeziwe ngasikhathi siphi isenzo esingakhanselwa ngokuchofoza inkinobho yesokudla yegundane kusihloko sefasitela.
Ngiyazi namie uphakamise inkundla entsha yokudlulisa izinsiza zomphakathi ngokusebenza nama-miniscreen.
Kungezwe umsebenzi wokusiza ukugcina amanothi nokwenziwa kohlu, okuhlanganiswe nohlelo ukubonisa izaziso nebha yomumo.
Futhi insiza yokulandela umkhondo ingeziwe ukulandelela umsebenzi womphathi wewindi nokukhiqiza amarekhodi e-JSON asekela i-chrome: // tracking.
Kungezwe ingxenye yamawindi ezivelelayo.
Kungezwe ukusekelwa okuyisisekelo kokulawula ukuthinta nemiyalo yamadivayisi wokujikeleza afana ne-'Surface Dial 'ne-'Griffin PowerMate'.
Kungezwe ingxenye yokuhlela izinhlelo zokuqalisa.
Kungezwe insiza yokusetha kokuqala ku-boot yokuqala.
Amandla wokukhetha ideskithophu ebonakalayo ukuvula amawindi amasha asetshenzisiwe.
Kungezwe izithunzi ezithambile zezinto eziboniswayo namawindi.
Amathuluzi angeziwe wokulondolozwa kwesikhashana nokwabelana ngezithonjana.
Kungezwe ikhono lokusondeza indawo eduze kwesikhombisi segundane.
Ekugcineni, kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukufaka imvelo Ideskithophu yaseDurden, kufanele bazi ukuthi ukufakwa kwe-arcan okusebenzayo kuyadingeka (Ungathola imininingwane ngakho mayelana nokufakwa kwayo kulesi sixhumanisi)
Ngaphezu kokuyibhala phansi, kungasiza ukumboza imephu yokhiye wesistimu (imisebenzi enikezwe ku-durden ingaphezulu kwezinga eliphezulu).
Imibhalo ye-arcan futhi ihlanganisa imininingwane yokuthi ungenza kanjani iX, wayland namanye amaklayenti asebenze.
Ngaphandle kwalokhu, kufanele uxhumanise noma ukopishe isiqondisi esinqunyelwe salesi sigcini lapho i-arcan ibheka khona izinhlelo zokusebenza, noma usebenzise indlela ephelele.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo, ungabonisana okuningi kulesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Durden, indawo yedeskithophu ye-Arcan
ISurfshark: Ukubuyekezwa kwensizakalo ye-VPN "ushaka"